बाहुनडाँडामा छापामारसँग – eratokhabar
नेकपाले कोरोनापीडित जनतालाई सहयोग गर्न सरकारलाई दियो १० बुँदे सुझाव
अनधिकृत चन्दा उठाउने आफ्नै कार्यकर्तालाई अखिल क्रान्तिकारीले गर्यो कारबाही
नेकपा नेत्री उमा भुजेल धरौटीमा रिहा भएलगत्तै पुनः गिरफ्तार
वैज्ञानिक बनका नाममा भइरहेको बन फडानी युवा सङ्गठनले रोक्यो
चौरजहारी हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई सख्त कारबाही गर्न दलित मुक्ति मोर्चाको माग
दलित किशोरीका हत्यारालाई कारबाही गर्ने दलित मोर्चाको चेतावनी
लकडाउन जनताका लागि सङ्कटकाल, मुट्ठीभर जनविरोधी तत्वहरूका लागि मालामाल : नेकपा
ऐन महरको वास्तविक चेहरा : विद्यार्थी नेता कि कुखुरे डन ?
नेकपानेत्री बन्दनाको अन्तिम संस्कार सम्पन्न, ५०–५० हजारको अक्षयकोष घोषणा
रुकुम हत्याकाण्डका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइए कारबाही गर्न बाध्य हुने दलित मोर्चाको चेतावनी
- खोमा तरामु मगर
२०७६, १६ मंसिर सोमबार २०:०६ December 2, 2019 ई-रातो खबर
ढुङ्गाले छाएको पुरानो गोठ । गोठको तलामा साँघुरो आँटी । आँटी खचाखच छ र अगाडि झुन्डिएको छ एउटा ह्वाइट बोर्ड । अर्थात् ह्वाइट बोर्डमा लेखिएको छ, ‘माक्र्सवादका तीन सङ्घटक अङ्ग– दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद ।’ ओहो, कस्तो जटिल विषय । तर सकेजति फार्ने पर्नेछ यो विषय । बोर्डमा लेखिएका विषयलाई कमरेडहरूले गुन्द्रीमा बसेर टिपिरहेछन् कापीका पानामा । डाँडातिर कुहिरो डम्म छ र सिमसिम झरी परेको छ । धमिलो बादल ओढेर मस्त निदाएको छ धौलागिरि हिमाल । तलतिर निसी खोला बगेको छ ।
देशभर राज्यले दमन चलाएको छ । कैयौँ कमरेडहरू जेल र हिरासतमा छन् । गोली चलेको छ र कमरेडहरू ढलेका समाचारहरू आएका छन् । राज्यको दमन र प्रतिरोधले सिर्जिएको नयाँ मौसम हो यो । अर्थात्, प्रतिक्रान्तिको अँध्यारो पर्दा च्यातिएर खुल्दै गरेको उज्यालो मौसम ।
हो, त्यही मौसमको त्यो दिन । अर्थात्, हिउँद सकिएर आँगनमा झरी परेको दिन । बागलुङको बाहुनडाँडामा भेटिए प्युठान डाम्रीका नरबहादुर थापामगर, अर्थात् ‘गम्भीर’ । रङ्गीन सपना बोकेर जनयुद्वमा होमिएका एउटा छापामार योद्धा । उनी बाहुनडाँडामा आइपुगेका थिए त्यो दिनको झरी थामिएपछि । दुनियाँ बदल्ने सपना उनेर उडेको एउटा मालचरी । छापामार युद्ध लड्दालड्दै उनका जुँगाका रेखी बसेछन् । कुर्कुरे बैँसमै ‘मायापिरिम’ बसेछ र युद्धमोर्चामा नै बिहे पनि भएछ अर्की छापामार योद्धा कमरेड आधारशिलासँग ।
प्युठानको डाम्रीबाट उडेको थियो त्यो मालचरी । कहाँ पुगम्ला भनेर उडेको त्यो चरी, कहाँ पुगेँ भन्ने ठम्याउनै नसकी रनाहा परेर साउदी पुगेछ । यसो गम्यो, एकपटक दृष्टि घुमायो र भन्यो ‘मालचरीको लामबाट धेरै चराहरू काठमाडौँ पसे । हेर्दाहेर्दै गिद्द बने । कोही चिल बने । कोही काग । अर्थात् कोही सिंहदरबार पसे । कोही बालुवाटार पसे । गुराँसको फेदमा कुइनो अड्याउँदै टाउको निहुराए र उनले भने, ‘तिनका चालढाल देखेर म त जिल खाएँ ।’
उनले कम्युनिस्ट घोषणापत्र पढाएर युद्धमा जान प्रेरित गर्ने कमरेडले सहरमा घरघडेरी जोडेको देखे । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा दिने कमरेड जग्गा प्लटिङ गर्दै हिँडेको देखे । सर्वहारावर्गको सिद्धान्त सिकाउने कमरेड विलासी गाडीमा हुइँकिएको देखे । जनवादी संस्कृति सिकाउने कमरेड गेरुवस्त्रमा मन्दिर गएर पूजाआजा गरेको देखे । बुर्जुवा शिक्षाको नारा सिकाउने कमरेडले छोराछोरीलाई सहरका ‘तारे’ बोर्डिङमा पढाएको देखे ।
उनले अरू केके देखे ? थाहा छ ?
कमरेडहरूले ‘सलाम कमरेड’ भनेर गरिने अभिवादन ‘नमस्ते’ मा फेरिएको देखे । कमरेडबाट ‘सर’ र ‘मेडम’ भएको देखे । ‘सर’ का औँला र ‘मेडम’ का घाँटीमा सुन फुलेको देखे । भातलाई ‘भुजा’ र बोलीपिच्छे ‘..सियोस्’ थपिएको सुने । अँ प्युठानको त्यो मगर ठिटो । अर्थात् जनयुद्धका एउटा सिपाही । उनले जनयुद्धका आरोहअवरोह सम्झिए र नजानिँदो गरी गम खाए । के सम्झिए कुन्नि ? उनले घरिघरि प्रचण्ड, बाबुराम, वर्षमान, कृष्णबहादुर महरा, पासाङलाई सम्झिए । त्यसपछि मुन्टो हल्लाउँदै लामो सास फेरे, ‘लडाइँमा धेरैको रगत बग्यो । अङ्गभङ्ग भए । धेरै कमरेडहरूलाई गुमायौँ । महान् सहिदहरूले धेरै सपना देखेका थिए । तर ती सपनाहरू एकैरातमा उडायो हुरीले ।’
अँ, मैले उनलाई बाहुनडाँडामा भेट्दा निकैबेर नियालेँ । उनका सपनाहरूका पखेटा कच्याककुचुक थिए । रोगले थला परेजस्तै देखिन्थे । विगत सम्झँदा उज्यालो थिएन उनका अनुहार । उनले जनयुद्धमा नेताहरूको सेन्ट्री गरेको पल सम्झिए । सेनाले गिरफ्तार गरेर ब्यारेकमा कठोर यातना पाएको सम्झिए । भाबाङ, भालुबाङ, बेनी, बुटवल, तौलिहवा, सुनवल, धरमपानी, तीनगिरेलगायत दर्जनौँ स्थानहरूमा आक्रमण गर्दाका क्षण सम्झिए । आफ्नै खुट्टामा गोली लागेर घाइते भई ढलेको क्षण सम्झिए । घाइते कमरेडलाई रक्तमुच्छेल बोकेर सुरक्षित स्थान पुर्याएको सम्झे ।
खुट्टामा गोलीको दाग देखाउँदै ङिच्च नक्कली हाँसो हाँसे । जनयुद्धको आँधीमा हुर्रिएको त्यो एउटा छापामार योद्धा । शान्तिप्रक्रियासँगै उनले ‘सर’ र ‘मेडम’ आफ्ना सालासाली, भान्जाभान्जी च्यापेर सहर छिरेको देखे । उनले आफूलाई हेरे र भने– ‘ आफू न त सरका साला परियो, न मेडमका कोही ।’
हामी बर्खाको झरीमा बाहुनडाँडाको धुरीमा पुग्यौँ । बाटोभरि चुत्रो पाकेको छ । पलम र आरुको मौसम रहेछ । आकाशमा डम्म कुहिरो छ । ढुङ्गाले छाएको त्यो पुरानो गोठ । गोठको आँटीमा ‘ कम्युनिस्ट स्कुल’ चलेको छ । मध्यान्तरमा ती कमरेड र म चौरतिर निस्कियौँ र सुस्तायौँ केहीबेर गुराँसको फेदमा । उनी कहिले भेटौँला र भनम्ला भनी साँचेर बसेजस्तै बोल्न थाले । जो सङ्गालिएका थिए जिन्दगीका सुखम–दुखम, प्युठानको डाम्रीगाउँदेखि जनयुद्वको आँधी हुँदै बाहुनडाँडाको यात्रासम्म । ओहो ! जनयुद्वका ती दिन । शान्तिप्रक्रिया र फेरि नयाँ क्रान्तिपछिको अप्ठ्यारा दिन । यी र ती यात्रा जति अप्ठ्यारा थिए र छन्, उति नै गर्विला पनि लाग्छन् उनलाई । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी दिन ? उफ् ! मनमा एकप्रकारको भाउन्न हुँदोरहेछ उनलाई । यहाँ किन आएको त नि ? प्रश्न नसकिँदै उनले भने, ‘सहिदका सपना त पूरा गर्न परो नि !’ उनी जीवन र भविष्यप्रति निरास देखिन्नन् ।
उनले कहानीको पोको फुकाए– छापामारमा भर्ती भएदेखि अहिलेसम्मको लम्बे यात्रा । भयावह दिनका क्षणहरू सम्झिँदा उनका आँखा रसाए । उनले लडाइँमा ढलेका घाइते र सहिद कमरेडहरूलाई सम्झिए । आफ्नै सहयोद्धा ढलेका क्षण सम्झिए । सहिदका सम्झनामा आयोजित श्रद्वाञ्जलीसभामध्ये सबैलाई रुवाउने सभाको घटना सुनाए । शान्तिप्रक्रियापछि प्रचण्डले भैँसीपूजा गरेको, तासको खालमा बसेको, महराले पास्चरसँग शिरमा हात राखेर आशीर्वाद मागेको, हिसिला यमीले मातासँग फोटो सेसन गरेको आदि देखेर उनले चित खाएछन् ।
क्यान्टोनमेन्टभित्रको रामकहानी पनि सुनाए । क्रान्तिमा ‘मुक्ति वा मृत्यु’ को शपथ खाएर युद्धमा होमिएका उनी जब क्यान्टोनमेन्टभित्र छिरे, वर्षदिन तलब नआउँदा उनको मन चसक्क भएछ । नेता र कमान्डरको तामझाम र कार्यकर्ताको दशा देखेर एकपालि होइन, लाखपालि गम खाएको प्रसङ्ग सुनाए । तर क्यान्टोन्टमेनभित्र सबै त्यस्तो नभएको प्रस्ट्याए ।
उनले सुनाए– ‘सुरुमा नेताहरू हिँडेर आउँथे, फाट्टफुट्ट मोटरसाइकलमा आउन थाले । बिस्तारै गाडीमा आउन थाले । त्यसपछि राता गाला बनाएर कालोकोटमा चिटिक्क परेर स्कार्पियोमा आउन थाले र भान्साहरू भिन्नाभिन्नै पाक्न थाले ।’ उनले क्यान्टोनमेन्टमा कमरेड विप्लव र अनन्तलाई भेटेको प्रसङ्ग पनि सुनाए । विप्लव कमरेडले भनेछन् रे, ‘ पार्टी बिग्रियो । सहिदका सपना पूरा हुने देखिएन । प्रचण्ड झन् बिग्रिए ।’
क्यान्टोनमेन्टमा उनलाई बसिनसक्नु भएछ । कैयौँ कमरेडहरू क्यान्टोनमेन्टबाट निस्किएका रहेछन् । ती निस्किएका कमरेडहरूको नाउँमा आएका करोडौँ पैसाभित्रै हिनामिना हुँदोरहेछ । नेताहरूले जनमुक्ति सेनालाई शाहीसेनामा विलय गराउन लागेको बुझेपछि उनले अवकाशमा जाने निर्णय गरेछन् । उनलाई जनयुद्धमा लडेर कायम गरेको इतिहास क्षणभरमा नै बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएछ । नेताहरू रिसोर्ट, तारे होटेल, सिङ्गापुर, मलेसिया, अमेरिका भ्रमणतिर तर कार्यकर्ताहरू भने जुत्ता फेर्न नसकेर हरिबिजोक । उनले भने, ‘चीनमा त सत्ता आएपछि प्रतिक्रान्ति भयो । तर यहाँ त नआउँदै भयो ।’
‘केही थान मान्छेहरूलाई बालुवाटार पठाउनलाई मात्रै हो यत्रो बलिदान ?’ उनको प्रश्नले मलाई पनि भाउन्न भयो र सम्झिएँ मैले– सानै उमेरमा घर छाडेर हिँडेको त्यो तन्नेरी छापामार लडाकु । क्यान्टोनमेन्टको काँडेतारभित्र बिताएका उसका कठोर दिन । सहिदका रगत कुर्सीसित साटेर मस्तीको जिन्दगी जिइरहेका ‘सर’ र ‘मेडम’ पनि आए आँखामा । सपना पूरा नहुँदै भत्किएको उनको ती निश्छल अनुहार सम्झेर मन भरङ्ग भयो ।
अवकाश लिएर घर फर्कंदा पराजित महसुस भएपछि रोजीरोटीका लागि उनी हान्निए साउदीतिर । साउदीमा पनि दोहोरिए दुःखका दिनहरू उसैगरी । उनले साउदीमा थुप्रै छापामार भेटेको सम्झिए । उनले भने, ‘ शान्तिप्रक्रियापछि नयाँ वर्गको जन्म भयो । तिनलाई सखाप नपारी कसरी गरिबका दिन आउला र ?’
जनयुद्धले केही थान मान्छेहरूका जीवन फेर्यो तर सहिद, बेपत्ता, घाइतेहरूका सपना जस्ताको तस्तै छन् । उनले जिन्दगीको सबैभन्दा ऊर्जाशील याम छापामार भएर बिताए । तर उनका सपना पूरा भएन । फेरिए त ‘सर’ र ‘मेडम’ का सपना र जीवनशैली । उनी भन्छन्, ‘जनयुद्धमा भएको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षका ‘लेखा’ हुनै बाँकी छ । एक–एक हिसाब हुनेछ र दिल खोलेर हाँस्ने दिन आउनेछ कुनै दिन जरुर ।’
ओ, लालगद्दारहरू हो ! नरबहादुर थापामगर अर्थात् ‘गम्भीर’ का आँखाका तुफानी सपनाहरू तिम्रो बन्दुक र दमनले रोकिएलान् कि अझ विस्फोट होलान् ?
bannerNews, bichar, mukhya, news, politics
← भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन
सामाजिक दलाल पुँजीवादका नेपाली विशेषताहरू →